राष्ट्रको अवाज रवीराज: ‘नेपाल लोक स्टार’ मा गलबन्दी गीत गाएर साह बने ‘प्रोफर्मस अफ द डे’ (भिडियो) « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
१७ श्रावण २०७६, शुक्रबार १४:३४
मधेशी मूलका नेपाली यूवा रवीराज साहले ‘नेपाल लोक स्टार’ मा गलबन्दी बोलको ‘ठेट’ लोकगीत गाएर आफूलाई ‘राष्ट्रको अवाज रवीराज’को रुपमा सावित गरेका छन् ।
उनले जुनैपनि कठिन गीतपनि गाउन सक्षम छन् भने आफूलाई स्थापित गरेको र रवी रियल गायक सावित भएको उक्त कार्यक्रमका जर्जहरुले प्रतिकृया दिएका छन् ।
गत बिहिबार प्रसारित पछिल्लो एपिसोडमा सुष्मा झासंग गलबन्दी गीत गाएर रवीराजले ‘प्रोफर्मस अफ द डे’ को उपाधी समेत हासिल गरेका छन् ।
यो गीतसंगै रविराज र सुष्मा झा सेफ जोनमा परेका छन् । साथै रवीराज र सुष्मा झा उत्कृष्ट १६ अर्थात आपसेआप ‘सेफ जोनमा’ परेका छन् ।
टप १६ छनोट एपिसोडमा मधेशी मूलका नेपाली यूवा रविराज शाहले सबै भन्दा उतकृष्ट प्रोफोमेन्स गर्दै ‘बेष्ट पर्फर्मरस ऑफ द डे’ हुन सफल भएका छन् । साहले यस एपिसोडमा चर्चित नेपाली गीत ‘गलबन्दी’ गएका थिए ।
यसबारे साहले आफु तराईमा जन्मेको एउटा मधेशीको छोरो भएर पनि आफुलाई नेपाली भएकोमा एकदमै गर्भ लागेको बताए । उनले आइएमई नेपाल लोक स्टारको मंचले आफूलाई मधेशबाट पहाड र हिमालसम्ममा पहिचान दिलाएकोमा खुशी ब्यक्त गरे ।
यस एपिसोडमार्फत १० जना डेन्जर जोन र १० जना सेफ जोनमा परेका प्रतिष्पर्धीहरु मध्ये साह सबै भन्दा उत्कृष्ट प्रफोमेन्स गरेर सिधै सेफ जोनमा पर्न सफल भएका छन् । साह मधेशी मूलका भएर पनि वाग्लुङ्गको लोक गीतलाई निकै तिखो त्वरबाट प्रस्तूती गरेर सबै जर्जहरुबाट खुलेरै प्रशंसा पाएका हुन् ।
साह अहिले सेफ जोनमा भएकोले तत्काल उनलाई भोट आवश्यक न भएपनि आगामी एपिसोडहरुमा उनले आफूलाई भोटिङ्ग गर्न आग्रह समेत गरेका छन् । मधेशी मूलका रविराज साह प्रदेश २ स्थित सर्लाहीका हुन् । यो शो नेपालकै सर्वार्धिक पुरस्कार राशी भएको रियालिटी शो हो । यस रियालिटी शो को बिजेता ले ५० लाख नगद, दोस्रो हुनेले २५ लाख नगद तथा तेस्रो हुनेले १० लाख नगद तथा उत्कृष्ट १२ जनाले विश्व भ्रमणको प्याकेज पाउने छन् ।
रविराज साहलाई भोटिङ्ग गर्ने तरिका निम्न बमोजिम रहेको छ :
नेपालका लागि : Type L(space) 01
Send to 37000 OR Dial from landline : 166677 Enter voting code : 01
भारतका लागि : Type L(space) 01 Send to 53010
कतारका लागि : Type L(space) 01 Send to 92300
साथै IME PAY APP बाट पनि भोट गर्न सकिन्छ ।
प्रकाशित मिति: १७ श्रावण २०७६, शुक्रबार १४:३४
गायक तथा मोडल दुर्गेश थापामाथि गीत चोरी गरेको ‘आरोप’
पछिल्लो समयमा नेपाली गितसंगित क्षेत्रमा गित चोरीको आरोप आइरहेको हामीले धरै सुनिरहेको अवस्थामा नेपाली चर्चित
यसरी हुन्छ प्रदेश १ मा प्रदेशसभाको बैठक [हेर्नुस् जस्ताको त्यस्तै प्रसारण]
हेर्नुस् भिडियो : ११ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरी हत्या गर्ने भारतीय पक्राउ
नेपालीहरुको बच्चा हुर्काउन अमेरिकामा कस्तो छ ब्यवस्था ? [हेर्नुस् ग्राउण्ड रिर्पोट]
के भारतीय कुटनैतिक फेल भएकै हो ? Zee News मा यस्तो छ सम्पादक केएमको भनाई [हेर्नुस् भिडियो]
वरिष्ठ पत्रकार तथा नागरिक टाइम्सका सम्पादक वीरेन्द्र केएमले भारतीय कुटनैतिक फेल भएकै कारण नेपालमा यस्तो